Thwebula Adobe Flash Player 32.0.0.465 Opera, Chromium... – Vessoft
WindowsUhleloIzandisoAdobe Flash Player
Ikhasi elisemthethweni: Adobe Flash Player
Adobe Flash Player – a plugin ezidingekayo ukuze umsebenzi okuyiwonawona multimedia kanye lokuqukethwe iziphequluli kakhulu. Isofthiwe inikeza nokucija eliphezulu zokuqukethwe futhi kwenza ukudlala imidlalo ehlukahlukene intanethi noma izicelo in the window browser. Isofthiwe iqukethe esakhelwe hardware of 2D kanye 3D ihluzo. Isofthiwe kabanzi phakathi abaklami kwenza ukusebenzisa amathuluzi ezahlukene ukunquma kwemigomo font noma ezahlukeneyo eziningana iflarha umbhalo. Futhi isofthiwe njalo olusha ukudlalwa ngempumelelo okuqukethwe kwabezindaba futhi evimbela zitha ukuqhuba izenzo ezehlukene uhlelo.
The ukudlala okuyiwonawona kokuqukethwe kwabezindaba
Ukudlala imidlalo, izithombe kanye nokukhangisa
Hardware of 2D kanye 3D ihluzo
Thwebula Adobe Flash Player
Amazwana ku Adobe Flash Player
Adobe Flash Player software ehlobene
The archiver enamandla ngokusekelwa ethandwayo archive takhiwo. Isofthiwe kwenza ukuba alulame ezinqolobaneni ulimele ukuguqula kwamanye amafomethi.
I-AV Uninstall Amathuluzi Pack – iqoqo lezinto ezisuka kubathuthukisi ezisemthethweni zemikhiqizo yezokuphepha ukukhipha ngokuphelele izinhlelo zabo zokusebenza ze-antivirus nezokulwa ne-antispyware kusuka ohlelweni.
I-AVS Video Editor – isoftware yokuhlela nokucubungula amafayela wevidiyo wezindlela ezahlukahlukene kufaka phakathi i-HD. Isoftware isekela imiphumela eminingi kanye nezihlungi.